हवाई मालिश मामिलामा लोमी लोमीको अर्थ आध्यात्मिक र मानव शरीरलाई प्रार्थना, नमक, आध्यात्मिक सफाई र ऊर्जा पुनर्स्थापना गर्ने केही तरिकाहरूको समानांतर आवेदनको साथ बहाल गर्न हो। प्रक्रियाले शरीरमा चयापचय प्रक्रिया सुधार गर्न, प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ, मेमोरी र ध्यान अनुकूलित गर्दछ, भावनात्मक क्षेत्रमा अवरोधहरू हटाउँछ।
लोमी लोमी मसाजको इतिहास
धेरै शताब्दीका लागि, हवाईमा शरीरको साथमा विशेष ध्यान दिइएको छ। यसमा आधुनिक संसारमा मात्र मालिश र नृत्य प्रविधिहरू समावेश थिएन तर मानिसहरूको आध्यात्मिक संसारमा पनि प्रवेश। यो "हनु" नामक व्यावहारिक हावा हावाको दर्शनको दर्शन हो। उनको अनुसार, सारा संसार ऊर्जा "मन्ना" देखि भरी छ।
"मन" जीवन शक्तिको व्यक्तित्व हो। यसको माध्यमबाट, कसैले गोप्य इच्छाहरू पूरा गर्न सक्छ र उहाँको वरपरको संसारमा प्रभाव पार्छ।
हवाई मालिश, कुन प्रशिक्षण अत्यन्तै गाह्रो छ, काहूनहरू द्वारा प्रयोग गरिएको थियो - ज्ञानका संरक्षकहरूले उपचार र प्रकृतिको तरिका बारे। यी गोप्यहरू जेनेरेसनबाट जन्मेका छन्। मालिश प्रदर्शन गर्दा ह्वाइलरहरू आवश्यक प्रार्थनाहरू पढ्छन्। यो विश्वास थियो कि कलाकार को हात ईश्वरीय आशिष् संचारित गर्दछ।
हावा र नृत्यसँग हवाईयन शम्यानहरू, जो पत्थरको वेदी वरिपरी प्रदर्शन गरिएको थियो। अनुयायी चयनित महिलाहरु र पुरुषहरुको लागि एक विशेष अभियान संग गरियो। काहूनहरूले अनुयायी धेरै लामो गरे। कहिलेकाहिँ यो धेरै दिन बित्यो।
हावाइको बाट यस प्रविधिको नाम "एक भौतिक cat को मखमल प्यान को नरम टच" को रूपमा अनुवाद गर्न सकिन्छ।
आज लोमी लोमी
हवाइजहाज शम्यानको प्रशंसाको लागि धन्यवाद, मालिश प्रभाव र यसको सरल निष्पादनको उच्च तह, यो प्रविधिले विश्वभरि व्यापक लोकप्रियता हासिल गरेको छ। आज, यस प्रक्रिया धेरै पेशेवर सैलूनहरूमा प्रयोग गरिन्छ।
तर साँचो मालिक फेला पार्न मालिशको सबै आधारभूत मालिकको मालिक अत्यन्तै गाह्रो छ। यदि यस्तो विशेषज्ञहरू उपलब्ध छन् भने, सत्रको लागि मूल्य निकै उच्च हुनेछ।
यस तथ्यको बावजूद कि हवाई मा लगभग सबै महिलाहरु मालिश प्रविधि हुन्छन् र प्रायः उनीहरुलाई आफ्नो पतिहरुलाई बनाइदिन्छ, अन्य देशहरूमा यो पूर्णतया खुलासा छैन र धेरैका लागि रहस्यमय बनेको छ।
मैले कहाँ सिक्न सक्छु?
व्यावसायिक मानेसरहरूको प्रशिक्षणका लागि स्कूलहरू रूसका धेरै शहरहरूमा अवस्थित छन्। कसरी हवाईयन मसाज गर्न सिक्न चाहनुहुन्छ? प्रशिक्षण (नोवोसिबिर्स्क यसको उत्कृष्ट मालिश पाठ्यक्रमहरूको लागि चिनिन्छ) लामो समयसम्म लिने छैन। विभिन्न प्रविधिहरूको नि: शुल्क प्रस्तुतिहरू अत्यधिक योग्य विशेषज्ञहरूद्वारा गरिन्छ।
मालिश को लाभ
हवाइजहाज मालिश, प्रशंसापत्रले यो प्रमाण दिन्छ कि त्यहाँ कुनै एनालॉगहरू छन्, धेरै सकारात्मक विशेषताहरू छन्:
एक सानो संख्या को विनाशक;
मनोचिकित्सा र शारीरिक अवस्थामा समानान्तर प्रभाव;
दक्षताको उच्च स्तर।
यो शरीर शरीर र आत्माको सद्भावको बारेमा परम्परागत पूर्वी विचारहरु संग जोडिएको छ। पोलिनेसियामा, हावाइजाउ मालिश न केवल हेलरहरुमा लागू हुन्छ, तर ओरिएंटल लडाई Olohe lua को मालिकहरु लाई पनि, जसले आफ्नो शक्ति बहाल गर्न यो विधि प्रयोग गर्दछ।
मालिश प्रयोग गर्ने मुख्य उद्देश्य शरीरको उपचार, उपचार र सामान्य बलियो हुन्छ।
हवाईमा मालिशले मद्दत गर्दछ:
रक्त परिसंचरणको सामान्यकरण;
उच्च तंत्रिका गतिविधि को काम को सुधार, जसको कारण एक व्यक्ति को भावनात्मक पृष्ठभूमि स्थिर छ, जीवन क्षमता र ऊर्जा संचित;
तनावको नतिजाको उन्मूलन;
तंत्रिका तंत्रको स्थिरता।
संसार हल्का रंगहरूमा देखा पर्दछ
हवाइजाउ मालिशले कठिन जीवन परिस्थितिको उपस्थितिमा संकेत गरेको छ।
लोमी-लोमी अप्रिय यादहरु र मानसिक संचरणहरु लाई मुक्ति को बढ़ावा दि्छ, मरीज को एक वास्तविक वास्तविकता मा फर्किन्छ।
हवाईअड्डी मालिशले रोगीलाई सकारात्मक ऊर्जाको साथ भोग्छ, आनन्द र भावनाको भावना जाग्दछ, रोगको दिमागलाई हल्का ल्याउँछ।
एक नियमको रूपमा, मसाले गर्भित इच्छाको निष्पादनको लागि मालिश गरिन्छ, जुन वास्तविकतामा अवस्थित छ। मालिकले रोगीलाई सल्लाह दिन्छ कि उनीहरूको विचारलाई ध्यानमा राखेर केही ध्यान दिन्छन्। उदाहरणका लागि, एक महिलालाई भविष्यका बच्चाको बारेमा सोच्न निमन्त्रणा दिईन्छ र घरको मातृ र रक्षकको भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गर्न निमन्त्रणा गरिन्छ।
मालिशको लागि संकेत
हवाईअसिसिया मालिश लोमी लोमी नुइ ध्यान, प्रेम, र भित्री भावनाबाट बञ्चित भएका मानिसहरूका लागि उपयुक्त छ। प्रविधिले तपाईंलाई अवसाद संग सामना गर्न अनुमति दिन्छ, न्यूरोसिसले रोगीहरूलाई अधिक आत्मविश्वास प्रदान गर्दछ, शान्त, माइग्रेन्स रिलीव गर्दछ।
साथै, ती व्यक्तिहरूका लागि मालिश सिफारिस गरिएको छ जसले मालुक्लोक्कोलटल प्रणाली, जस्ट्रोटिस्टिनल पथ, हाइपरटेन्सनको उजुरीको साथ समस्या छ। यो हृदय रोगको साथमा पनि मद्दत गर्दछ, मांसपेशिहरु र छाला लोचदार र लोचदार बनाउँछ।
यस प्रविधिको प्रयोगको संख्यामा धेरै विनाशकारी छ।
मालिश प्रयोग भएको छैन जब:
तीव्र रूपमा संक्रामक रोगहरू;
एक क्यान्सर युक्त ट्यूमरको उपस्थिति;
लिम्फेटिक प्रणालीको रोग;
घाउहरू र फोडाहरूको उपस्थिति।
मालिश उमेरका उमेरका उमेरका बच्चाहरु र5बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरुको लागि अपमानजनक छ।
लोमी लोमी मालिशको प्रभाव
मालिशले धैर्यतापूर्ण अवस्थाबाट बाहिर लैजान सक्छ, आतंकको हमला रोक्न, उत्तेजना र अवरोध हटाउन सक्छ। यसले संज्ञानात्मक कार्यलाई सुधार गर्छ, दबावको सामान्यता बढाउँछ।
साथै, प्रक्रियाले व्यक्तिलाई कुनै पनि प्रकृतिको पीडाबाट बचाउन सक्छ। यसले आंत गतिशीलतामा सुधार गर्छ, खुट्टाको अवस्था अनुकूलन गर्दछ, अस्थमा संग मद्दत गर्छ, सुन्न अनुकूल गर्दछ।
हवाईअड्डा मालिश लोमी लोमी दुवै शारीरिक र मानसिक रूपमा पुनःप्राप्त गर्ने मौका हो। एकै समयमा, रक्त परिसंचरण अनुकूलित हुन्छ, जोडहरु राज्य सुधार गर्दछ।
हवाईअड्डा मालिश प्रविधिको आफ्नै विशेषताहरू छन्:
प्रक्रियाको बेला, मोमबत्तीहरू जलाशयित हुन्छन्, हावामा हावा हावाको आवाज उठाउँछन्, कोठामा धूप र तेलहरूको सुगन्ध हो। रोगीले उष्णकटिबंधीयताको गर्मी महसुस गर्न थाले। सबै तत्वहरूले रोगीको अधिकतम विश्राममा योगदान गर्दछ। एक व्यक्तिले सोचेको छ कि उसको शरीर अनावश्यक छ भनेर निषेधात्मक छ।
प्रक्रियाबाट अधिकतम दक्षता प्राप्त गर्न मुख्य भूमिका तपाइँको विषयक रवैया सत्रको लागि हो। तपाई आफैलाई भन्नु पर्छ: आज मेरो दिन हो, र सारा संसार एक्लो मात्र एक्लो हुन्छ।
यो गोपनीय इच्छा वा तपाईंको जीवनमा राम्रो परिवर्तनहरूको चाहना गर्नुपर्ने सल्लाह दिइन्छ। एक मालिशको बेला, यो प्रकारका विचारहरूले तपाईंलाई छोड्नु हुँदैन।
यदि तपाईं एक वास्तविक पेशेवरसँग भेटघाट गर्दै हुनुहुन्छ भने जसले हवाईअड्डाबाट मालिश प्रविधि अपनाएको छ, त्यसपछि सत्र भन्दा पहिले कलाकारले तपाईंसँग आध्यात्मिक सम्पर्कमा प्रवेश गर्न चाहन्छ। उहाँले निश्चित रूपले तपाईंलाई हृदय कुरा गर्न एक कप चाँदीको छेउमा निमन्त्रणा दिनुहुनेछ।
प्रक्रियाको अवधि लगभग एक घण्टा छ। मालिशले सम्पूर्ण शरीरलाई समाहित गर्दछ, अन्तरिक्षीय क्षेत्रहरूको बाहेक।
हावाइंग टेक्नोलोजीले हवाईमा गीतहरूसँग समयको फोरियरम क्षेत्रबाट एक मालिश प्रदर्शन गर्दछ।
साम्राज्यको आचरण चिकनी र नरम हुन्।
प्रक्रियाको क्रममा, कसैले एक शरीरको दोषहरूमा विचार ध्यान दिदैन। यो पूर्णतया मालिकमाथि भरोसा राख्नु र सकारात्मक मनोवृत्ति कोयम राख्न आवश्यक छ। यो यो कार्यक्रम हो जुन तपाईंको अवचेतनामा पठाइनेछ।
प्रक्रियाको अन्त्य पछि, गुरुले तपाईंलाई राज्यको शान लामो समयसम्म मौनतामा बोल्न आग्रह गर्नेछ।
फर्केर घर फर्किदा, यो भरपूर पेय लिन को लागी सल्लाह दिइएको छ। कार्बोनाइटेड पेयहरू उपभोग गर्न सकिँदैन। यसलाई गहिरो सास फेर्न सल्लाह दिइन्छ, शान्त संगीत सुन्नुहोस्, न्यानो आराम नदिनुहोस्। यो लामो समयसम्म सम्भव हुनुपर्छ जुन आधुनिक जीवनको अशांति लयमा नखोज्नु पर्छ।
मसाज लोमी-लोमी कुनै दिनमा राखिएको छ।
उपचार वा रोकथामको लागि, 5-10 सत्र सिफारिस गरिन्छ।
मालिशको प्रविधिले यसको चरणहरू समावेश गर्दछ:
साम्राज्यको मुख्य कार्य को एक भावनात्मक क्षेत्र मा अवरोध को अन्वेषण र समाप्त गर्न को लागी छ। यी क्षेत्रहरूको परिभाषा मांसपेशिहरु, गतिशीलता वा जोडहरु को कठोरताको कठोरता वा नरमतामा आधारित छ। तंत्रिका तंत्र को तनाव को महत्वपूर्ण संकेतकहरु असमान सांसद र छिटो हृदय दर हो। उसको छालाको रंगले रोगीको अवस्था पनि संकेत गर्दछ।
बिरामीको भावनात्मक पृष्ठभूमिको निर्धारण पछि, मालिशले घटाउने फैटी तहलाई असर पार्छ। यस अवस्थामा, यो न केवल पुर्खा र कोला द्वारा मात्र मालिश गरिन्छ। भित्ता र औंलाहरूको पैड पनि जोड्नुहोस्। मास्टरले शरीरलाई विशेष मालिश काटनका साथ काठको बनाइदिन्छ, जुन शरीरको आकृति सही गर्न मद्दत गर्दछ।
त्यसपछि साम्राज्यले आफ्नो ध्यान जोड्नु र मांसपेशिहरु स्विच गर्दछ। यस चरण को सार मुख्य परिणाम प्राप्त गर्न मा छ: जोड़ों को लचीलापन को डिग्री मा वृद्धि, मांसपेशियों मा तनाव को राहत।
एक विशिष्ट साइट जसको एक पेशेवरले आफ्नो मासु सुरु गर्दछ, अवस्थित छैन, किनकि पुरा जीव प्रभावित हुन्छ। एक विशेषज्ञले आफ्नो विवेकमा शरीरका केहि क्षेत्रमा ध्यान दिन सक्दछ।
प्रक्रियाको अन्तिम चरण शरीरमा असर प्रभावकारी प्रकारको संयोजन मार्फत: हातबाट हातमा राख्ने रङ (रिक्), फोरियर क्षेत्र र कुखुरामा सबैभन्दा हल्का दबाव, ह्यान्ड्स र पैड संग मालिश।
हवाई मेसिन लोमी लोमी, जसका समीक्षाहरू सबैभन्दा सकारात्मक हो, एक बलियो आराम प्रभाव छ, र यसको पछि एक व्यक्ति 1.5 दिनसम्म जोगाउन सक्दैन। यस प्रक्रिया को प्रभाव धेरै दिन को लागि रिजर्ट मा रहन को प्रभाव को बराबर छ।
प्रक्रियाको अवधि 90-180 मिनेट छ। पहिलो मालिश सत्रको अवधि3घण्टा भन्दा कम हुनु हुँदैन। शरीरको सकारात्मक गतिशीलताका लागि यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
मानिसहरूको अनुसार, लोमी-लोमी मसाजको प्रभावले शब्दहरू वर्णन गर्न कठिन छ। यो आफैमा महसुस गर्नुपर्छ। प्रक्रियाले तपाइँलाई टाइप गरिएको नकारात्मकबाट हटाउन अनुमति दिन्छ। शरीर सजिलो हुन्छ, र आत्मा दुर्व्यवहार, रिस र शोकबाट मुक्त छ। मालिश कुनै प्रकारको जादूको तुलनामा हुन सक्छ। उहाँले साँचो शान र विश्राम दिनुहुन्छ। केही बिन्दुमा यो व्यक्ति व्यक्तिले सार्वभौमिकतामा फर्केको जस्तो देखिन्छ, र सबै समस्याहरू धेरै टाढा टाढा छन्।
गर्भवती महिलाहरू पनि मालिश गर्न सहमत हुन्छन्। उनीहरूको विचारमा, यो जन्मको जिम्मेवार क्षणको लागि आराम र तयार गर्न मद्दत गर्दछ।
लाभ र हानि: लागि earache लोक उपचार
ऊर्जा मूल्य: एक अन्डा। अण्डा सेतो: ऊर्जा मूल्य
सबैभन्दा स्वादिष्ट बर्गर कहाँ छ? उचित जाँच बाहिर "Carls जूनियर"